Ungamthola kanjani umuntu ku-Instagram: Zonke izindlela | Izindaba zamagajethi
Ungamthola kanjani umuntu ku-Instagram
I-Instagram isibe yinethiwekhi yokuxhumana ethandwa kakhulu okwamanje. Eminyakeni yamuva ibe nokukhula okukhulu, okuholele ezigidini zabantu ukuthi zibe ne-akhawunti kuyo. Ungaba ne-akhawunti kuyo, nokuthi kwesinye isikhathi uhlose ukubheka umuntu omaziyo noma umkhiqizo onephrofayili.
Lapho ufuna umuntu ku-Instagram kufanele sicabangele izici eziningana. Njengoba ingasebenzi ngendlela efanayo namanye amanethiwekhi wokuxhumana nabantu. Ngakho-ke, kuhle ukwazi ukuthi yini okufanele siyenze noma ukuthi yini okufanele siyicabangele maqondana nalokhu ezinkundleni zokuxhumana ezidumile.
1 Sesha ku-Instagram
2 Ungabasesha kanjani abantu
3 I-Google iphrofayli ye-Instagram
4 Igama ku-Facebook
Ngokungafani namanye amanethiwekhi omphakathi, ku-Instagram kuvamile othile uvula iphrofayli ngaphandle kokusebenzisa igama lakhe langempela. Esikhundleni salokho, kusetshenziswa igama elithi alias, ikakhulukazi kulokho okubizwa ngegama lomsebenzisi. Njengoba kunemininingwane emibili okufanele siyazi mayelana nesicelo, Kokubili ekwakhiweni kwephrofayili njengalapho ufuna umuntu.
Ku-Instagram singacinga umuntu osebenzisa igama lakhe lomsebenzisi, okuyigama lephrofayili, ukuyikhombisa ngandlela thile. Uma ufaka isiphequluli kunethiwekhi yokuxhumana nabantu, yigama elivela ku-URL. Kepha igama lomsebenzisi alisho ngaso sonke isikhathi alihambisani negama langempela lomuntu. Ngakho-ke lapho sifuna, kungenzeka singatholi njalo imiphumela elindelekile kuhlelo lokusebenza. Uma sazi igama lomsebenzisi, ukusesha ngeke kube yinkimbinkimbi futhi ngeke kuthathe isikhathi eside. Kepha uma sazi kuphela igama lakhe langempela futhi engalisebenzisi lelo gama kwinethiwekhi yokuxhumana nabantu, kuba nzima kakhulu.
Igama lomsebenzisi lihlale lisinika umphumela, okuzoba okwephrofayili ethile ku-Instagram, ngakho-ke siyazi ukuthi ngabe ngulo muntu noma cha. Igama langempela liyinkimbinkimbi ngokwengeziwe, ngoba kungahle kube nabantu abaningi kakhulu abanalelo gama, ngaphandle uma linegama lokuqala noma isibongo, elinciphisa ngokusobala usesho.
Ungabasesha kanjani abantu
Lokhu yinto esingayenza kuzo zonke izinhlobo ze-Instagram, noma ngabe sisebenzisa ikhompyutha noma inguqulo ye-smartphone. Lapho sifaka i-akhawunti yethu, siyabona ukuthi phezulu sithola ibhokisi lokusesha, elinophawu lwengilazi yokukhulisa. Yilapho esizofaka khona igama esifuna ukulenza kwinethiwekhi yokuxhumana nabantu. Ngakho-ke sichofoza kuso bese siqala ukubhala.
Singabeka igama noma igama lomsebenzisi, kuya ngemininingwane esinayo ngalo muntu ku-Instagram. Njengoba sibhala, siyabona ukuthi uhlu luvela ngezansi, okuvame ukuba kuncane lapho sifaka ezinye izinhlamvu zegama. Eduze kwephrofayili ngayinye sithola isithombe esincane. Ngakho-ke, kungenzeka ukuthi simbone lowo muntu kulesi sithombe, ukuze sibathole. Yize uma iphrofayili ingenaso isithombe, kungenzeka singazi ukuthi ngabe ngumuntu esimfunayo yini lowo.
Inethiwekhi yokuxhumana nabantu isivumela ukuthi sifake le phrofayela ngaso sonke isikhathi. Inkinga ukuthi uma sivakashela iphrofayili, ngoba sifuna ukwazi ukuthi ngabe lo muntu noma cha, kepha-ke bekungenjalo, lapho sibuya, kufanele siqale ukusesha futhi. Lokhu kungenye yezinkinga ezinkulu zenethiwekhi yokuxhumana nabantu kulokhu. Ngakho-ke uma lowo muntu engenaso isithombe sephrofayela negama elijwayelekile kakhulu, kungathatha isikhashana ukuthi siqede ukusesha le phrofayela.
I-Google iphrofayli ye-Instagram
Uma kuyi-akhawunti ye-Instagram yomuntu owaziwayo noma inkampani noma uhlobo lomkhiqizo, singabuye sibuyele kuGoogle. Mane ufake igama lomkhiqizo oshiwo kusiphequluli bese ufaka i-Instagram ekugcineni, ukuze sithole i-URL esisa kuphrofayili eshiwo kwinethiwekhi yokuxhumana nabantu. Ukusuka lapho, singangena ku-akhawunti esipheqululini bese silandela le akhawunti ngqo.
Usesho lwe-Google lungahlolwa futhi nomuntu oyedwa, yize lolu hlelo kungavamisile ukuthi luphumelele kakhulu kulezi zimo. Kepha uma ufuna i-akhawunti enabalandeli abaningi, njengamaphrofayili osaziwayo noma abathonya, noma labo bemikhiqizo, ingasebenza kahle kakhulu futhi ilula impela. Ikakhulukazi uma sisebenzisa njalo inguqulo kusiphequluli se-Instagram. Njengoba sikwazi ukulandela lawa ma-akhawunti ngqo kukhompyutha.
Kuyinto imininingwane esingayinaka, ngoba abasebenzisi abaningi banama-akhawunti abo e-Facebook axhunywe nalawo e-Instagram. Ngakho-ke, singabasesha sisebenzisa amagama abo ku-Facebook, noma igama lomsebenzisi abanalo ku-Facebook. Into ejwayelekile kakhulu ukuthi kuzofana kuzimo zombili, ukuze sikwazi ukuthola lo muntu ngendaba yemizuzwana embalwa bese sikwazi ukuthola umuntu esimfunayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Amanethiwekhi omphakathi » Ungamthola kanjani umuntu ku-Instagram
Ukuhlaziywa kwesipikha se-Energy Sistem Outdoor Box Street
Ungayibuka kanjani yonke i-preseason ye-FC Barcelona neReal Madrid CF mahhala